ကိုယျမကွိုကျတိုငျး နားမလညျတိုငျး မကောငျးဘူးမပွောမိပါစနေဲ့လို့ ထိထိမိမိပွောလိုကျတဲ့ Ar T – Askstyle
ကိုယျမကွိုကျတိုငျး နားမလညျတိုငျး မကောငျးဘူးမပွောမိပါစနေဲ့လို့ ထိထိမိမိပွောလိုကျတဲ့ Ar T
ကိုယ်မကြိုက်တိုင်း နားမလည်တိုင်း မကောင်းဘူးမပြောမိပါစေနဲ့လို့ ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ Ar T
ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်ဟန်ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် Ar T ကတော့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။ စကားပြောရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့ Ar T ကတော့ လတ်တလောမှာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူကို အားပေးတတ်ကြဖို့ ထိမိတဲ့ စာလေးတစ်ကြောင်းရေးပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရမ်းကို ထိရှတဲ့ Ar T ရဲ့အမြင်လေးကိုတော့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ထောက်ခံထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။
မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ထိမိလွန်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူကို အားပေးတတ်ကြဖို့ ပြောလာတဲ့ အဆ်ိုတော် Ar T ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Ar t ကတော့ “ညံ့ရင် ဆူပါဆဲပါ ။ ကောင်းရင်တော့ Appreciate လုပ်ဖို့ မရှက်ကြပါနဲ့ !!!
မကြိုက်ဘူး နဲ့ မကောင်းဘူး ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ခွဲခြားသိမြင်ပေးပါ ။ ကိုယ်မကြိုက်တိုင်း နားမလည်တိုင်း ကိုယ်မခံစားတတ်တိုင်း ကိုယ်စောက်မြင်ကပ်တိုင်း မကောင်းဘူးမပြောမိစေနဲ့ !! ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါးစီးပွား မထိခိုက်စေနဲ့ !!” ဆိုပြီး အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ နည်းလမ်းမမှားစေဖို့ ပြောထားတာပါ။
အဆိုပါ Ar T ရဲ့ပိုစ့်အောက်မှာတော့ တင်ဇာမော်နဲ့ ယုန်လေးတို့ကလည်း ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ရေးသားထားကြပါသေးတယ်။
ပရိသတ်အတွက် အသစ်အသစ်သော အနုပညာတွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ Ar T ကတော့ လတ်တလောမှာ သီချင်းသစ်တွေ ဖန်တီးဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အနုပညာရှင်ကို အားပေးတာ နည်းလမ်းမှန်ကန်စေဖို့ ပြောပြလာတဲ့ Ar T ကို သဘောကျရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ထူးခွားတဲ့ ပငျကိုယျဟနျရှိတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော Ar T ကတော့ ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီခငျြးတှကေို သီဆိုလရှေိ့သူတဈဦးပါ။ စကားပွောရငျလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောတတျတဲ့ Ar T ကတော့ လတျတလောမှာ ကိုယျသဘောကတြဲ့သူကို အားပေးတတျကွဖို့ ထိမိတဲ့ စာလေးတဈကွောငျးရေးပွီး လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အရမျးကို ထိရှတဲ့ Ar T ရဲ့အမွငျလေးကိုတော့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး ထောကျခံထားကွတာ တှရေ့ပါတယျနျော။
မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အရမျးကို ထိမိလှနျးတဲ့စကားလုံးတှနေဲ့ ကိုယျသဘောကတြဲ့သူကို အားပေးတတျကွဖို့ ပွောလာတဲ့ အဆိုတျော Ar T ရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
Ar t ကတော့ “ညံ့ရငျ ဆူပါဆဲပါ ။ ကောငျးရငျတော့ Appreciate လုပျဖို့ မရှကျကွပါနဲ့ !!!
မကွိုကျဘူး နဲ့ မကောငျးဘူး ရဲ့ အနကျအဓိပ်ပါယျကိုလညျး ခှဲခွားသိမွငျပေးပါ ။ ကိုယျမကွိုကျတိုငျး နားမလညျတိုငျး ကိုယျမခံစားတတျတိုငျး ကိုယျစောကျမွငျကပျတိုငျး မကောငျးဘူးမပွောမိစနေဲ့ !! ကိုယျ့ကွောငျ့ သူတဈပါးစီးပှား မထိခိုကျစနေဲ့ !!” ဆိုပွီး အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှေ နညျးလမျးမမှားစဖေို့ ပွောထားတာပါ။
အဆိုပါ Ar T ရဲ့ပိုဈ့အောကျမှာတော့ တငျဇာမျောနဲ့ ယုနျလေးတို့ကလညျး ထောကျခံတဲ့အကွောငျး ရေးသားထားကွပါသေးတယျ။
ပရိသတျအတှကျ အသဈအသဈသော အနုပညာတှကေို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ Ar T ကတော့ လတျတလောမှာ သီခငျြးသဈတှေ ဖနျတီးဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အနုပညာရှငျကို အားပေးတာ နညျးလမျးမှနျကနျစဖေို့ ပွောပွလာတဲ့ Ar T ကို သဘောကရြငျ Share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။